ကိုယျ့ကို ပွုံးပွနတေဲ့မကျြနှာတှရေဲ့ တဈဖကျမှာ – Shinyoon
ကိုယျ့ကို ပွုံးပွနတေဲ့မကျြနှာတှရေဲ့ တဈဖကျမှာ ကိုယျ့ကို မုနျးနတေဲ့စိတျတှေ ရှိနတေတျတယျ ….
တကယျပါ … တခြို့က ကိုယျရှရေ့ောကျရငျ ဖျောရှတေတျကွပမေယျ့လဲ ကိုယျ့နောကျကြောကို ဓားနဲ့ထိုးဖို့စောငျ့နတေဲ့လူတှမြေားတယျ …. ကိုယျတကယျ ဒုက်ခဖွဈတဲ့အခြိနျမှသာ အဲ့မကျြနှာအမှနျတှကေ ပိုပွီးထငျထငျရှားရှား မွငျလာရတတျတယျ …
မယုံကွညျနဲ့ မဟုတျဘူး ယုံကွညျပါ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ခငျမငျပေါငျးသငျမှုမှာ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ယုံကွညျတဲ့စိတျလေးရှိဖို့လိုအပျတယျလေ … ဒါပမေယျ့ အလုံးစုံယုံကွညျလိုကျရငျတော့ ကိုယျ့အမှားဖွဈသှားလိမျ့မယျ …
အဆငျပွလေား မေးတတျတဲ့ ပါးစပျတှကေပဲ ကိုယျအဆငျမပွတေော့တာနဲ့ ဟနျမဆောငျနိုငျလောကျအောငျပွုံးသှားတတျတာကိုလဲ ကွုံခဲ့တှခေဲ့ဖူးပွီ … နာကငျြနတောလားဆိုပွီး ဖေးမခငျြယောငျ ဆောငျတဲ့လကျတှကေပဲ ဒဏျရာကို ဆားထပျသိပျသှားကွတာပါ …
ဒီလူတော့ ယုံကွညျရလောကျပါရဲ့ဆိုပွီး ကိုယျရငျဖှငျ့ခဲ့မိတာ သိပျကို မှားသှားတယျ … အဲ့ဒီလူကပဲ ကိုယျ့အကွောငျးတှေ ဒိုငျခံဖှတော့တာလေ … ကိုယျပွောတဲ့အရာတှထေကျ ခြဲ့ကားပွီးပွောခဲ့သလို ကိုယျမမှားခဲ့တာတှကေိုလဲ ကိုယျမှားခဲ့သယောငျ ပွောဆိုကွတယျ …
ကိုယျထငျထားသလောကျ မရိုးရှငျးဘူးဆိုတာမှနျး လူတှကေပဲ သငျသှားပေးကွတာပါ … ပွုံးနတေဲ့ မကျြနှာရဲ့တဈဖကျမှာ ကိုယျ့ကို မုနျးနတေဲ့စိတျတှရှေိနတေတျတယျ… ကိုယျဖွဈမှ ကိုယျသိလာမယျဆိုရငျတော့ အရမျးနောကျကသြှားမှာပေါ့… အခုကတညျးက ဆငျခွငျမိတာကောငျးမယျ
ကိုယ့်ကို ပြုံးပြနေတဲ့မျက်နှာတွေရဲ့ တစ်ဖက်မှာ ကိုယ့်ကို မုန်းနေတဲ့စိတ်တွေ ရှိနေတတ်တယ် ….
တကယ်ပါ … တချို့က ကိုယ်ရှေ့ရောက်ရင် ဖော်ရွေတတ်ကြပေမယ့်လဲ ကိုယ့်နောက်ကျောကို ဓားနဲ့ထိုးဖို့စောင့်နေတဲ့လူတွေများတယ် …. ကိုယ်တကယ် ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အချိန်မှသာ အဲ့မျက်နှာအမှန်တွေက ပိုပြီးထင်ထင်ရှားရှား မြင်လာရတတ်တယ် …
မယုံကြည်နဲ့ မဟုတ်ဘူး ယုံကြည်ပါ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ခင်မင်ပေါင်းသင်မှုမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ယုံကြည်တဲ့စိတ်လေးရှိဖို့လိုအပ်တယ်လေ … ဒါပေမယ့် အလုံးစုံယုံကြည်လိုက်ရင်တော့ ကိုယ့်အမှားဖြစ်သွားလိမ့်မယ် …
အဆင်ပြေလား မေးတတ်တဲ့ ပါးစပ်တွေကပဲ ကိုယ်အဆင်မပြေတော့တာနဲ့ ဟန်မဆောင်နိုင်လောက်အောင်ပြုံးသွားတတ်တာကိုလဲ ကြုံခဲ့တွေ့ခဲ့ဖူးပြီ … နာကျင်နေတာလားဆိုပြီး ဖေးမချင်ယောင် ဆောင်တဲ့လက်တွေကပဲ ဒဏ်ရာကို ဆားထပ်သိပ်သွားကြတာပါ …
ဒီလူတော့ ယုံကြည်ရလောက်ပါရဲ့ဆိုပြီး ကိုယ်ရင်ဖွင့်ခဲ့မိတာ သိပ်ကို မှားသွားတယ် … အဲ့ဒီလူကပဲ ကိုယ့်အကြောင်းတွေ ဒိုင်ခံဖွတော့တာလေ … ကိုယ်ပြောတဲ့အရာတွေထက် ချဲ့ကားပြီးပြောခဲ့သလို ကိုယ်မမှားခဲ့တာတွေကိုလဲ ကိုယ်မှားခဲ့သယောင် ပြောဆိုကြတယ် …
ကိုယ်ထင်ထားသလောက် မရိုးရှင်းဘူးဆိုတာမှန်း လူတွေကပဲ သင်သွားပေးကြတာပါ … ပြုံးနေတဲ့ မျက်နှာရဲ့တစ်ဖက်မှာ ကိုယ့်ကို မုန်းနေတဲ့စိတ်တွေရှိနေတတ်တယ်… ကိုယ်ဖြစ်မှ ကိုယ်သိလာမယ်ဆိုရင်တော့ အရမ်းနောက်ကျသွားမှာပေါ့ … အခုကတည်းက ဆင်ခြင်မိတာကောင်းမယ်
မနှောငျ့ယှကျခွငျးဖွငျ့ မငျးကိုခဈြပါတယျ ….